संसारकै महँगो खानेकुरा, जसको मूल्य सुन्दा नै होश उड्छ ! – Everest Dainik – News from Nepal
संसारकै महँगो खानेकुरा, जसको मूल्य सुन्दा नै होश उड्छ !
संसारमा यस्तो खानाकुरा छन् कि जसलाई खानको लागि एक वर्षको कमाइले पनि सम्भव नहुने देखिएको छ । हामी खानाबिना बाँच्न सक्दैनौं । बाच्नको लागि खाना निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । तर संसारमा यस्ता महंगो खानेकुरा छन् । जुन खानेकुरा खानको लागी धेरै पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
यस आइसक्रिमलाई देख्ने बित्तिकै सबै मानिसलाई खान मनलाग्नेछ ।उक्त आइस क्रिमको क्रिमको नाम गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकडमा पनि राखिएको छ । यो आइसक्रिमको मुल्य संसारमा जति पनि आइक्रिम बनेका छन् त्यस मध्येको महंगो आइसक्रिम हो । यस्तो किसिमको आइक्रिमको मुल्य १६ लाख रहेको छ ।